Yey saameyneysaa xayiraada uu ku hanjabay Mareykanka ee madaxda Soomaalida? - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Yey saameyneysaa xayiraada uu ku hanjabay Mareykanka ee madaxda Soomaalida?
Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Caynte ayaa ka hadlay digniinta uu saaray Mareykanka ee la xiriirta dib u dhac kale ee ku yimaada doorashada, taasi oo qorshuhu yahay in la soo gaba-gabeeyo 25-ka Febraayo.
Mareykanka ayaa horey dhowr jeer ugu hanjabay inuu beegsan doono qas wadayaasha Soomaaliya, hase yeeshee weli ficil ma qaadin. Si kastaba, ilo-wareedyo diblomaasi ayaa Banaadirsom u sheegay inay markan ka go’an tahay inay tallaabo qaadaan.